ရှမ်းအစားအစာကို ရှမ်းတောရွာမှာ ချက်ပြုတ်တဲ့အတိုင်း အရသာရှိရှိ စားသုံးနိုင်မယ့် “ Aroma & Shwe Taw Thar” 🍜🍃☘ – YANGON STYLE
ရှမ်းအစားအစာကို ရှမ်းတောရွာမှာ ချက်ပြုတ်တဲ့အတိုင်း အရသာရှိရှိ စားသုံးနိုင်မယ့် “ Aroma & Shwe Taw Thar” 🍜🍃☘
တိတ်ဆိတ်ညိမ်သက်ပြီး View ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ကန်ရေပြင်ကြီးကို အစားအစာတွေစားရင်း ငေးရမယ်ဆို ဘယ်လိုလဲ😉😉 ဓာတ်ဖမ်းလို့လည်း ရသေးတယ်📸
အရသာကောင်းချစ်သူတွေ မလာမဖြစ် လာသင့်တဲ့နေရာလေး📌
နေရာလေးက သူငယ်ချင်းတွေလာမလား/ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲဆုံမလား/ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲလာမလား/ ချစ်သူတွေလာမလား/ မိသားစုတွေလာမလား နေရာလေးက နိုင်ငံခြားသားတွေအကြိုက်လည်းဖြစ် အရသာလည်း ရှိတော့ ဘာလိုသေးလဲ..
ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ဆိုတော့ လမ်းလျှောက်လာလည်း အဆင်ပြေသလို👣🚘 ကားနဲ့လာလည်း ကားပါကင်အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗျ….
မီးတောင်လိုပါပဲ အကြီးကြီး ပန်းကန်နဲ့အပြည့်ပဲ ဝက်နံရိုးမီးတောင်ပါ နံရိုးကိုမှ အသားတွေအများကြီး ၂ယောက် ၃ယောက်ကတော့ စားရောပဲ
သူ့ကိုစားမယ်ဆိုရင် လက်အိတ်လေးတော့ တောင်းဗျ😃 စားပုံစားနည်းကလည်း အသားတွေကို တန်းဖဲ့မစားဘဲ အနှစ်အရည်လေးကို လောင်းတာနဲ့ အသားစားပြီး အနှစ်လေးသောက်ရင် ရှယ်ပဲဗျ အရည်လေးကလည်း ကောင်းတာဆိုတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် ကောင်းတယ်ဗျ ပန်းကန်လေးသေးတို့တောင် အကြံပေးခဲ့တယ် ပြင်ဆင်ဖို့ ရှိပါတယ်တဲ့😁
သူကလည်း ရှမ်းမြေရောက်လုနီးနီးပဲ ကောက်ညှင်းဖြူကိုမှ ပဲပုပ်လေးကပ်ပြီး မီးသွေးနဲ့ ကင်ထားတာတဲ့ဗျ ပဲပုပ်အနံ့လေးထွက်အောင် ကင်ထားတယ်ဗျ ဘေးမှာသခွားသီးစိတ်လေးရော ပါသေးတယ်
ကညွတ်လေးကတော့ စားကောင်းပြီး အရသာရှိချက်ပဲ နှစ်တစ်ရာသီးလေးတွေကလည်း ဆိမ့်တယ် သူကလည်း မဖြစ်မနေ စားသင့်တဲ့ ဟင်းပွဲလေးပဲ
ပုံလေးမြင်တော့ မြင်ဖူးနေကြ အာလူးကြော်တွေနဲ့ ကွဲထွက်သွားတယ် အာလူးမျှင်ခြောက်ကြော်ကတော့ ပီဇာဒီဇိုင်းလေးဆွဲထားတာဗျ ပုံလေးကလည်းဆန်း အာလူးအရသာလည်းပျောက်မသွားဘဲ ကျွတ်နေတာပဲ Sauce ကလည်း အချို ၊အစပ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ ကွက်တိပဲ..😋
သူ့ပုံလေးကလည်း ထူးဆန်းနေတယ်ဗျ..မြေပဲနှင့် လုပ်ထားတာတဲ့ဗျ မြေပဲနှင့် လုပ်တာကိုမှ အစို၊ အကြော်နဲ့ အနှစ်ရည်ဆိုပြီး သုံးမျိုးရနိုင်တယ်တဲ့ဗျ။ ခု စားခဲ့တာလေးကတော့ တိုဟူးအစိုတုန်းလေးဗျ မြင်တာနဲ့ စားချင်စဖွယ်လေးပါပဲ ဆိမ့်တယ်ဗျ တို့စားဖို့ နှမ်းထောင်းလေးက အသက်ပဲ😁 နည်းနည်းပဲ တို့စားဗျ နည်းနည်းလေးတယ်
🍹ပြီးတော့ အသီးဖျော်ရည်နဲ့ Aroma Special Menu လေးနဲ့ဆို ပြည့်စုံပါပြီလေ…
📓ခုက စားခဲ့တာလေးတင် Review ပေးထားတာပါခင်ဗျ
Menu တွေလည်း များတဲ့အပြင် Portionများတယ် ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း သင့်တင့်တဲ့အထဲမှာ ပါတယ်ဗျ💰
သရေစာ/ ကြက်သား/ ဝက်သား/ ငါး/ ပင်လယ်စာ/ အကင်/ အထောင်း/ အသုပ်/ အရွက်ကြော်/ ဟင်းရည်/ အချိုရည်/ အချိုပွဲ/ အသီးဖျော်ရည်/ Aroma Special ဆိုပြီး အစုံပဲဗျ🤔
အလွန်ဖိုင်းတဲ့ Dating ဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ
“ Aromaနှင့် ရွှေတောသား” (ရှမ်းမြေလက်ရာ)
🔸Branch (1) Karaweik Oo-yin Kabar, Kandawgyi Nature Park, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph – 09428830493, 09 – 950215907
တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ မကုန်ဆုံး စေချင်လို့ လမ်းညွှန်လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်😉 နောက်တစ်ပတ်မှာ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ😍
….ခု သွားခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေးက ကန်တော်ကြီးထဲက ဆိုင်လေးပါ
မြေနီကုန်းမှာလည်း ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ Jun လလယ်မှာ စဖွင့်ထားပါတယ်ဗျ..
🔹Fb Link လေး👇
🔸Branch (2) No.17/B, Tha Pyay Nyo Street, Sanchaung Township, Yangon.
Ph – 09 773071672